‘वडालाई व्यवस्थित गर्न उम्मेदवारी’ | आर्थिक अभियान
‘वडालाई व्यवस्थित गर्न उम्मेदवारी’
लामो समय समाज सेवामा लागेकी विपना शर्मा आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका–११ मा वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी छन् । समाज सेवामा लाग्दै गरेकी शर्माले किन उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिन् ? चुनाव जित्न कस्ता एजेन्डा लिएर उनी मतदातासमक्ष गइरहेकी छन् ? र, निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि वडाको विकासका लागि शर्माले बनाएका योजनामा केन्द्रित हुँदै आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईंको परिचय बताइदिनुस् न ?
मेरो नाम विपना शर्मा हो । काठमाडौं महानगरपालिका–११, त्रिपुरेश्वरमा जन्मेकी हुँ । यही ठाउँमा हुर्कनुको साथै बिहे पनि यहीँ भएको हो । बसोवास थापाथलीमा छ । २० वर्षदेखि समाजसेवामा छु । थापाथली जनकल्याण परिवार, अन्धा कल्याण सेवाको आजीवन सदस्य छु । त्यस्तै १५ वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई दिवासेवा प्रदान गर्न ‘अधिकारका लागि प्रयास नेपाल’ सञ्चालन गरिरहेकी छु ।
आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका–११ को वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको रहेछ । राजनीतिमा कसरी चाख लाग्यो ?
सानैदेखि समाज सेवामा लागेको अनुभवका आधारमा नेपाल आमाको सेवा गर्न राजनीति नै चाहिने रहेछ भन्ने लाग्यो । समाज सेवाले मात्र नीति, नियम परिवर्तन नहुँदो रहेछ भन्ने लागेपछि राजनीतिमा लाग्ने विचार आएको हो । समाज सेवा सीमित क्षेत्रमा भयो । त्यसैले अब समाज सेवाले मात्र पुगेन । आफ्नो वडा बनाउन राजनीतिमा लागेकी हुँ ।
वडा कार्यालयमा कामका लागि जानुपर्‍यो भने कागजी अझ भनौं ढड्डा पद्धति छाडिएको छैन । डिजिटलाइजेशनको जमानामा भइरहेको ढड्डा प्रणालीलाई हटाउने मेरो लक्ष्य छ ।
कुन राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिनुभएको हो ?
विवेकशील साझा पार्टीबाट ।
विवेकशील साझा पार्टी किन रोज्नुभयो ?
अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा प्रजातान्त्रिक भावना भएको विधान, प्रतिबद्धता पाएकाले विवेकशील साझा रोजेकी हुँ ।
चुनाव जित्न कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ?
यतिखेर म बसोवास गर्दै आएको वडाको सडक, खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, पार्किङ अव्यवस्थित छ । बाग्मती सभ्यता रहेको बस्तीको हालत त्यस्तै छ । नदीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । वडा कार्यालयमा कामका लागि जानुपर्‍यो भने कागजी अझ भनौं ढड्डा पद्धति छाडिएको छैन । डिजिटलाइजेशनको जमानामा भइरहेको ढड्डा प्रणालीलाई हटाउने मेरो लक्ष्य छ ।
त्यस्तै वडामा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकामैत्री पूर्वाधारको विकास गर्नुछ । बालबालिका, कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकका लागि पार्क र दिवासेवा केन्द्रको आवश्यकता छ । हरियाली संरक्षणमा उत्तिकै काम गर्नुछ । वडा नम्बर ११ मा टुँडिखेल, रंगशाला, सैनिक ब्यारेक छन् । ती स्थानबाट वर्षात्मा परेको पानी रिजभ्र्वायरमा संकलन गर्न सक्ने हो भने पूरै वडावासीलाई कम्तीमा ६ महीना पुग्छ । त्यसैले वर्षात्को पानी संकलन गरेर पानीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
हाम्रै वडामा पर्ने त्रिपुरेश्वरको यूटीसी खासै उपयोग भएको छैन । त्रिपुरेश्वरमा अवस्थित यूटीसी लक्षित गरी चारैतर्फबाट फ्लाइओभर बनायो भने व्यवसाय प्रवर्द्धन हुन्छ । यूटीसीको व्यावसायिक प्रवर्द्धन हुने हो भने पूरै वडालाई राम्रो गर्छ । त्यसैले मेरो जोड यूटीसी लक्षित फ्लाइओभर निर्माणको प्रयत्न हुनेछ । उक्त कार्यले सडकमा हुने जामको समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ । साथै पार्किङ समस्या समाधान गर्न भर्टिकल रोटरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पार्किङको समस्याले सर्वसाधारणलाई बाटोमा हिँड्न समस्या छ । मैले सानो मात्रामा किन नहोस् राम्रो कामको बीजारोपण गर्ने लक्ष्य लिएको छु । अनि मेरै वडामा राम्रा सरकारी स्कूल र अस्पताल छन् । त्यस्ता स्कूल र अस्पताललाई राम्रो व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा दिन जोडदार पहल गर्नेछु । ता कि कम से कम थोरै आय भएका वर्गले पनि आफ्नो सुविधा उपभोग लिन पाऊन् ।
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका काम एउटा वडाअध्यक्षले गर्न सक्ला त ?
पक्कै पनि काम गर्न कठिन छ । विज्ञहरू, वडाका ज्येष्ठ नागरिक तथा भुक्तभोगीको सल्लाह, सुझाव र सहयोगबाट यी काम पूरा हुनेमा म विश्वस्त छु ।